Large Format Printer, oyimfakamfele Machine, Cutting iyelenqe - YINGHE
Iphrinta enkulu yedijithali yefomathi
Laser Engrver Kwaye umsiki
Umatshini wokushicilela ubushushu obuphantsi
Umatshini wokwenza iAlbham
IOfisi kunye noMatshini wokuPakisha
Imbali ye-YINGHE kunye nemowudi yeshishini: YINGHE ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD kuphela kwesuphamakethi yezixhobo zasekhaya ezinendawo yokugcina iinkonzo zakwamanye amazwe kwilizwe liphela. inkampani yethu yasekwa ngo-2002, emva kweminyaka yophuhliso, YINGHE iye eyaziwa kakuhle zasekhaya angaphandle izixhobo eliphezulu-zobugcisa lweshishini mihla, isikali inkampani, iimveliso kunye neenkonzo kweli lizwe yesibini emva namnye. Iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kumazwe angaphezu kwama-200 kunye nemimandla yehlabathi.
Njengeyona nto iphambili kumatshini wokushicilela we-inkjet, uzinzo lwentloko yokuprinta ngokungathanga ngqo kumisela umgangatho womatshini. Xa iindleko ezisisigxina zentloko eprintiweyo ziphezulu kakhulu, ungabandisa njani ubomi benkonzo yentloko eprintayo, ukunciphisa iindleko zokutshintsha kunye nenqanaba lokunxiba, kunye nokugcina intloko ngokuchanekileyo.
Uyintoni umahluko phakathi kwesiseko samanzi ...
Izinto eziluncedo ezine ze-piezoelectric inkjet p ...